Sony Xperia Compact wuxuu ku laaban doonaa rarka sanadka 2021 | Androidsis
Sony Xperia Compact wuxuu ku laaban doonaa rarka si uu ula tartamo iPhone 12 Mini
Mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan Japan taleefannadiisa waa kuwa qoyska Wadajirnimada Xperia. Qalabyo kala duwan oo u taagnaa cabbirkooda yar iyo astaamaha awoodda badan.
Dhibaatadu waxay tahay kororka cabirka shaashadaha taleefannada ayaa sababay in si tartiib tartiib ah qoyskani u barokacay ilaa ay ku dhammaadeen halmaanka. Hadda isbeddelka cusub ee iPhone 12 Mini uu soo rogayo ayaa wax ka beddeli kara kuwa Qoyska Sony Xperia Compact.
Runtu waxay tahay in iPhone 12 Mini uu dib u soo nooleeyay xiisihii taleefannada is haysta. Qalab ku faanaa shaashad kaliya 5.4 inji, oo ah wax aan caadi ahayn maanta, oo ku faanaa astaamo farsamo oo aan la tixgelin karin. Sony waxay ogaatay in kaladuubkeeda Xperia Compact uu yahay ikhtiyaarka ugufiican ee markale suuqa lagu weeraro.
Ka taxaddar, macluumaadkan waa in lagu qaadaa badar milix ah, in kastoo halka laga soo daadiyay waa xogaha asal ahaan ka soo jeeda Jabbaan oo badanaa ku dhaca dhammaan saadaashiisa la xiriira Sony, sidaa darteed waxay u badan tahay in qoyskani aakhirka soo noolaan doono.
Miyuu Sony Xperia Compact u qalmaa maanta?
Laga soo bilaabo waxa ay u muuqato, taleefanka soo socda ee Sony Compact qoyska wuxuu noqon lahaa terminal kor u qaadaya guddi 5.5-inji ah, oo leh ujeeddo cad oo ah inuu noqdo bedelka ugu fiican ee iPhone 12 Mini iyo shaashadiisa 5.4-inji. Sida faa'iidooyinka qalabkan, waxaa jira hadal ku saabsan Snapdragon 755, isbeddelka Qualcomm's 765 oo u muuqda inuu leeyahay isku xirnaanta 5G.
Waqtigan xaadirka ah waxaan wajaheynaa war xan ah, laakiin runtu waxay tahay inay macno u yeelan laheyd Sony inay soo nooleyso qoyskeeda Xperia Compact si ay ula tartanto xalalka Apple. Iyo fikradda ah helitaanka qiimaha dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ee 'Android' oo qaab yar ah ayaa si gaar ah loo jecel yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sony Xperia Compact wuxuu ku laaban doonaa rarka si uu ula tartamo iPhone 12 Mini
OnePlus 9 Pro wuxuu ilaalin doonaa naqshadda 8T laakiin wuxuu ilaalin doonaa qalooca shaashadda